Be different ! ကွဲပြားအောင်လုပ်ပါတဲ့။ | မာသင်
Be different ! ကွဲပြားအောင်လုပ်ပါတဲ့။
Apple ပဲ့ကိုင်ရှင် Steve Jobs ပြောခဲ့တာ။
သူသာသေသွားပေမယ့် .. သူပြောခဲ့တဲ့စကားက အခုထိမှန်နေတုန်းပဲ။
ကွဲထွက်တယ်ဆိုကတည်းက လူအုပ်ကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို သွားတာ။
လူအများနဲ့ ဆန့်ကျင်ရတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့်.. တစ်ချိန်မှာ ..
လူအများငွေမဝင်တဲ့အချိန်မှာ ..ကိုယ်က ငွေတွေအများကြီးဝင်နေတယ်ဆိုရင်ပဲ
လူအများစီးပွားမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ .. ကိုယ်က စီးပွားဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ပဲ
ဒီကွဲပြားစွာဖောက်ထွက်ခြင်းက တန်ဖိုးရှိနေပါပြီလေ။ ။
စီးပွားရေးမှာ ကွဲပြားခြင်း ဆိုတာ ပိုကောင်း စရာမလိုအောင် ကောင်းလှပါတယ်ဗျာ။။
မာသင် ၏ စီးပွားရေးဖလော်ဆော်ဖီ